Obodo mara mma nke Badajoz: Site na Olivenza ruo Alburquerque | Njem akụkọ
Louis Martinez | 07/05/2022 16:00 | España, Nduzi
Ha dị ọtụtụ ọmarịcha obodo Badajoz na ọ na-esiri anyị ike ịhọrọ ndị anyị ga-egosi gị. Ógbè Extremadura juputara na obodo ndị pụtara ìhè ma maka ihe ịchọ mma ha ma maka ọdịdị ala ha nwere oke.
Ma nke ikpeazụ, mbara ala na-eme nri nke osimiri na-apụta ìhè. Guadiana na ngalaba ya, nke Guadalupejo, ma na larịị na ugwu na, dị ka nke San Pedro, ka bụ nke Montes de Toledo, ọ bụ ezie na ha nọ nso Portugal. Na, gbasara ihe ncheta ya, Badajoz bụ otu n'ime mpaghara nwere akụkọ ihe mere eme na Spain niile. Mpaghara Vetton bụbu, mechara bụrụ akụkụ nke Lusania Roman na-emecha wekota n'ime Muslim onwunwe na, n'ikpeazụ, a ghọtara dị ka mpaghara nke Castilla na Oke ehi from 1371.Ma, ahapụla ụfọdụ na pipeline, anyị ga-egosi gị obodo ndị mara mma nke Badajoz.
1 Olivenza, obodo Portuguese ochie
2 Zafra, otu n'ime obodo Badajoz
3 Llerena, otu n'ime obodo mara mma na Badajoz
4 Jerez de los Caballeros, obodo nke ụlọ elu ise
5 Fregenal nke Sierra
Olivenza, obodo Portuguese ochie
Okporo ụzọ dị na Olivenza
Anyị na-amalite njem anyị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke ógbè ahụ iji gwa gị banyere obodo a mara mma nke na-achọsi ike na ọ bụ naanị Spain kemgbe 1801, ebe ọ bụ na ọ bụ akụkụ nke Portugal.
Nnukwu akara ya bụ nnukwu ụlọ ochie ma ọ bụ ebe e wusiri ike ma ọ bụ nnukwu ụlọ olivnza, nke ka na-echekwa mgbidi ya dị ukwuu site na narị afọ nke XNUMX, ụlọ elu ya na ọnụ ụzọ ámá dị ka nke Alconchel, de los Ángeles, de Gracia na San Sebastián, nke mbụ abụọ ejiri ụlọ elu okirikiri abụọ kpuchie. N'ime, ị nwere ike ịhụ Chọọchị Santa María del Castillo, nke nwere ọmarịcha ebe ịchụàjà nwere Osisi Jesi.
Na mbubreyo Middle Ages bụkwa nke ajuda bridge, nke e nyere iwu ka eze wuo ya Manuel I nke Portugal ịgafe Guadiana. Ebibiri akụkụ ụfọdụ n'oge Agha nke Ịgachi, emeghachibeghị ya.
Banyere ihe ncheta okpukpe na obodo Badajoz, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na nke chọọchị Santa Maria Magdalena, nke eze n'onwe ya wuru, ya mere ọ na-anabata ụdị Manueline, ụdị Portuguese nke Gothic n'oge. Ọzọkwa, ị ga-ahụ na Ụlọ Nsọ nke ebere, nke Convent nke San Juan de Dios na, ugbua na mpụga Olivenza, foduru nke Chọọchị Romanesque nke Valdecebadar. N'ikpeazụ, echefula ịga na bullring, onye ihe owuwu ya malitere na etiti narị afọ nke XNUMX, ma na-agagharị n'okporo ámá ya na nhazi oge ochie.
Zafra, otu n'ime obodo Badajoz
Obí nke Dukes nke Feria, na Zafra
N'agbanyeghị na ọ nwere naanị ihe dị ka puku mmadụ iri na ise, Zafra nwere aha obodo, nke eze nyere ya. Alfonso XII. Ọ bụ ezie na ndị Alakụba tọrọ ntọala ya, na gburugburu ya, e nwere ọtụtụ ihe fọdụrụ n'ime ụlọ ndị Rom, ya mere akụkọ ya dịkwa nnọọ ukwuu.
Mana, nke kachasị, obodo Badajoz a pụtara maka ọtụtụ ihe ncheta ya. Otu n'ime ndị kasị ahụkarị nke ya bụ Plaza Grande na Plaza Chica. Nke mbụ na-abụkarị arcaded na ụbọchị sitere na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na ụfọdụ arcades sitere na XNUMXth. Site na oku Arch nke achịcha, ebe ị nwere ike ịhụ obere ebe ịchụàjà, na-ekwurịta okwu na Plaza Chica, ebe a ma ama Zafra Rod. Ọ bụ kọlụm nke ndị na-ere ahịa dị na ogige ahụ na-eji tụọ ihe ha.
Ha na-ahụkarị na obodo Extremadura Seville Street na Carnation uzo, yana ebe mgbaba Jerez na Cubo. N'akụkụ ya, Ụlọ Nzukọ Alaeze dị n'obí ochie nke narị afọ nke XNUMX. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụdị ihe owuwu a, ihe kachasị mkpa na Zafra bụ ihe dị egwu Obí nke Dukes nke Feria, ụlọ ndị njem nlegharị anya ugbu a.
Banyere ụlọ okpukpe nke obodo Badajoz, ihe dị egwu Candelaria na ụlọ ụka Rosario, ma malite na narị afọ nke XNUMX, yana ebe obibi nke Belén na ebe obibi ndị nọn nke Santa María del Valle.
Llerena, otu n'ime obodo mara mma na Badajoz
Plaza nke Spain, na Llerena
Ebe obodo ochie kwuputara ogige nka nke akụkọ ihe mere eme, Llerena sokwa na obodo Badajoz mara mma. Ebe etiti akwara ya bụ Ogige Spain, ebe i nwere ike ihu ihe puru iche Churchka nke Our Lady of Granada, nke nwere ala abụọ mara mma nwere mbara ihu. Ụlọ Nzukọ Obodo dịkwa n'ebe ahụ na nso isi iyi nke onye na-ese ihe mere Francisco de Zurbaran.
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-ahụ na obodo Badajoz ya Mgbidi nke narị afọ nke iri na atọ na Zapata Palace, Ebe Ụlọikpe nke Njụta na-adịbu na nke nwere patio Mudejar dị egwu. Banyere ụkpụrụ ụlọ okpukpe, jide n'aka na ịga leta ebe obibi ndị mọnk nke Santa Clara, n'ime ụlọ nsọ ya e nwere ebe ịchụàjà nke baroque na ihe osise nke Saint Jerome, ọrụ nke Juan Martinez Montana. N'ikpeazụ, gaakwa na chọọchị Santiago na n'obí episcopal.
Jerez de los Caballeros, obodo nke ụlọ elu ise
Arco de Burgos, na Jerez de los Caballeros, pụrụ iche n'etiti ọmarịcha obodo ndị dị na Badajoz.
Ihe ịtụnanya ọzọ dị egwu n'etiti ọmarịcha obodo Badajoz bụ Sherry nke ndị Knight, onye isi akara ya bụ ụlọ elu templar, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX n'elu ozu nke nnukwu ụlọ ndị Arab ochie. A gbara ya gburugburu nke ọnụ ụzọ ámá abụọ fọdụrụ: Burgos na Villa.
Ma a maara Jerez dị ka obodo nke ụlọ elu ise maka inwe ọnụ ọgụgụ a n'ime ha Badị Baroque. N'ime ha bụ ndị nke Chọọchị Santa María de la Encarnación, San Miguel Arcángel na San Bartolomé, nke ikpeazụ stylistically metụtara Giralda na Seville.
N'otu aka ahụ, obodo Extremadura nwere ọtụtụ ụlọ ndị nọn nke mmasị. Ọmụmaatụ, ndị nke Saint Augustine, Our Lady of the incarnation na Nne nke Chineke. Na nwekwara ọtụtụ ọmarịcha hermitage dị ka nke San Lázaro, Cristo de la Vera ma ọ bụ Los Santos Mártires. N'ikpeazụ, echefula ileta Ụlọ ihe ngosi nka nke Núñez de Balboa, ebe a mụrụ onye mmeri a ma ama.
Fregenal nke Sierra
Walk of the Constitution, na Fregenal de la Sierra
Kpọmkwem n'akụkụ obodo gara aga n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ ya. Ọ bụkwa n'ime obodo mara mma nke Badajoz ka anyị na-egosi gị maka ọnọdụ ya n'okpuru ụkwụ Sierra Morena na maka ihe nketa ya dị mkpa. N'otu aka ahụ, o nwere a ụlọ elu templar site na narị afọ nke XNUMX bụ ebe a chọtara ihe fọdụrụ Roman na Visigoth ochie, nke na-egosi na e wuru ya n'elu nke mbụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, n'ime ogige ya bụ mgbụsị akwụkwọ, nke sitere na narị afọ nke iri na asatọ. Na, mmasị na nnukwu ụlọ, bụ chọọchị Santa Maria, nwekwara ụbọchị na XIII, ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu ebe ịchụàjà nke XVIII. Banyere ụlọ arụsị, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na ụlọ ụka Santa Catalina Mártir, Santa María de la Plaza na Santa Ana, yana ebe obibi ndị nọn nke San Francisco, nke eweghachiri nso nso a, na San Ildefonso de la Compañía de Jesús.
Mana, ikekwe, nnukwu uru patrimonial nke Fregenal de la Sierra, nke bụ ihe mgbagwoju anya nke akụkọ ihe mere eme, bụ ya. manor ụlọ. Guzo n'etiti ha nke Penches, nwere ọmarịcha patio Neo-Mudejar. Ma ụlọ ndị eze nke Counts of Torrepilares, site na narị afọ nke XNUMX, nke Marquises nke Riocabado, site na XNUMXth, na nke Marchioness nke Ferrera, dịkwa oke mma.
N'ikpeazụ, Isi iyi Fontanilla Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX na n'etiti ya nwere niche nwere ihe oyiyi nke Virgen de la Guía, ebe nke María Miguel nwere akụkọ banyere ndị hụrụ abụọ n'anya n'ụdị Romeo na Juliet.
Churchka nke San Francisco, na Albuquerque
Dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ógbè Badajoz, aha ya sitere na okwu Latịn albus quercus, nke pụtara na-acha ọcha oak. Nke a bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị osisi ndị a na mpaghara ahụ, karịsịa osisi oak.
N'ezie, Alburquerque bi kemgbe oge ochie, dị ka e gosiri site na Eserese ọgba nke ugwu San Blas, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị site na Bronze Age. Mana nnukwu akara nke obodo Badajoz bụ nnukwu ụlọ ọnwa, nke e wuru na njedebe nke Middle Ages na nke na-achịkwa ya site n'ugwu. Ma ọ bụghị naanị ya nọ n'ógbè ahụ. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri na abụọ site n'ebe ahụ Ụlọ elu Azagala, n'akụkụ mmiri mmiri La Peña del Águila.
Ọ bụkwa ihe akaebe na oge ochie nke Albuquerque ya ogige mgbidi, ya na ụlọ elu dị ka elekere ma ọ bụ Cabera na nkeji Gothic ya, nke a maara dị ka Villa n'ime ma kwupụta ihe mgbagwoju anya akụkọ ihe mere eme. Maka akụkụ ya, ndị Churchka nke Santa Maria del Mercado Ewubere ya n’agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, n’agbanyeghị na emegharịrị ya na XNUMXth. N'ime, ị nwere ike ịhụ ihe osise bara uru nke Cristo del Amparo.
Ọ bụghị naanị ụlọ nsọ na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịga na Albuquerque. Churchka nke San Mateo bụ Renaissance, nke San Francisco nwere ọmarịcha Churrigueresque ebe ịchụàjà, dị ka ebe ịchụàjà nke Ebe nsọ nke Nwanyị anyị nke Carrión, na hermitage nke Nuestra Señora de la Soledad bụ nke ụdị baroque. N'ikpeazụ, Santa María del Castillo bụ ụlọ nsọ Romanesque nke oge ochie.
N'ikpeazụ, anyị emeela njem na gị site na ụfọdụ n'ime ọmarịcha obodo Badajoz. Mana, dị ka anyị gwara gị na mmalite, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị ọzọ na mpaghara Extremadura. Ọmụmaatụ, Burguillos del Cerro, kwuputara saịtị Mmasị Omenala, Ọfọn, ya na nnukwu ụlọ nke narị afọ nke XNUMX, Azaga, ya na chọọchị ya nke Nuestra Señora de la Consolacion, nke kasị ukwuu n'ógbè ahụ dum, ma ọ bụ Fresno Riverside, na nnukwu ụlọ ya na Vargas-Zúñiga. Ọ naghị adị gị mma ileta ihe ịtụnanya ndị a niile?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo mara mma nke Badajoz